Ongorora: Ngatibvise iyo Pacifier, Shut Muromo Wako uye Mhino Kudzokorora | Kudzidziswa Kwekuziva
Semaonero angu, chimwe chezvinhu zvakaomesesa zvekurapa kwekutaura ndechekuti, zvisinei nehukuru hwacho, chinangwa ndechekuti chinja tsika. Kunyangwe iri kumedza, kufema kana izwi, tiri kutaura pamusoro pechinhu chatinoita mazuva ese uye dzimwe nguva kuitira zviuru zvezuva pazuva.
Kuchinja tsika kunotora nguva uye kusagadzikana. Neichi chikonzero, kana kazhinji kune vekutanga kutaura varapi kudikanwa kuri kunzwisisa cosa fa (iyo "runyorwa rwemaekisesaizi"), mushure menguva pfupi iyo kudiwa inova iyo yekunzwisisa huya hako Kuita kuti zviitwe zvinoitwa zviwedzere kukurudzira uye kutaridzika.
Iwe unozviziva izvozvo kunzwisisa zvazvinoreva pane izvo zviri kuitwa zvinobatsira kuwedzera kubatanidzwa uye kuchengeta kukurudzira kwakakwira, asi kutaura kuvana (uye kazhinji nevabereki!) maererano neyechirariro mashandiro uye malocclusions zvirokwazvo hazvibatsire. Nekudaro, aine mazwi akakodzera uye mienzaniso, kunyangwe pfungwa dzakaomarara dzinogona kuburitswa. Aya mabhuku matatu atichataura nezvawo nhasi, rimwe nerimwe riine nzira dzakasiyana uye zvinangwa, tibatsireiwo mune izvi.
Isu tinobvisa pacifier - naPaola Perrone
Isu tinobvisa pacifier yemurapi wekutaura Paola Perrone (grafiki dhizaini uye mifananidzo naLisa Ciccone) yakakamurwa kuva mahafu maviri.
Muchikamu chekutanga, zvayakanakira nezvayakaipira pacifier zvinotariswa mumutauro wakapusa asi wakanyatsorongeka. Zvisinei nemusoro wenyaya, muchokwadi, munyori haaite dhimoni chinhu asi, nekusiyana, anokurudzira nguva nenzira dzekuzvizivisa uye, pakupedzisira, zvibvise nenzira dzakasiyana siyana, kubva ku "nzira yemazuva matatu" kusvika pakupa kunaka kusingafadzi. kumatinji, kupfuura nemhemberero yekuonekana chaiyo. Chitsauko chechitatu chinobata nezvakawanda zve "tekinoroji" zvekumedza, malocclusions uye chimiro chekutaura, zvichipa mamwe mazano anoshanda pakusiya pacifier pazera remakore maviri kana matatu. Uye zvakare, bhuku racho harishaye ruzivo rwakadzama pamusoro pehumwe hunhu hwemuromo (sekuyamwa munwe) uye zvakajairika pamusoro pekukuvara kunokonzerwa nekufema nemuromo.
Muchipiri (chitsauko 6) nyaya nhanhatu dzakanyatsoratidzwa dzinoratidzwa, dzichiita mhuka dzichitarisana nerwendo rwavo rwekusiya pacifiers, mabhodhoro, zvigunwe nekufema kwemuromo.
Simba: zvinoshanda. Iri bhuku rinoratidzira akasiyana matekinoroji, nzira, zvinhu zvekutora mukufunga. Iye haazeze kana zvasvika pakurumbidza chimiro chakanakisa kana zvinhu zvechigadziko, kana nguva dzakakodzera dzekuraswa kwayo. Kunyange chiri chokwadi kuti mwana wese akasiyana, ichokwadi zvakare kuti, pakati penzira dzese dzakapihwa, iwe uchawana iyoa - kana zvimwe zvingadaroe ndizvozvo iwe.
Vhara muromo wako ibhuku "remitambo uye zviitiko zvekufema zvakanaka" rakagadzirwa nevarapi vekutaura Anna Bosco naChiara Castellani uye yakaratidzwa naAlice Walczer Baldinazzo.
Sekutaura kunoita zita rekuti, "Vhara muromo wako" inounganidza zviitiko zvekutungamira mwana kubva pamuromo kusvika kumhino kufema. Muchikamu chedzidziso tinowana chikamu chedzidziso pamusoro pekukosha kwekufema nemuromo uye mamwe mazano anobatsira pakugeza mumhuno. Muchikamu chinoshanda tinowana nyaya dzakasiyana siyana dzinoteverwa nemitambo (inokwanisika kuita) kugadzirisa pfungwa yekufema, kufema mukufamba (nezvikamu zvakateedzana kubva kuyoga) uye, pakupedzisira, mweya wemhino. Dzese nyaya uye zviitiko zvinoratidzirwa musitayera isingavhiringidze, asi panzvimbo pezvo inosimbisa tarisiro yechiitiko.
Simba: zvakasiyana-siyana. Vanyori vakashandisa chirevo chekusika kwevarapi vekutaura kuti vataure mamiriro nezviitiko zvinogara zvakasiyana pachinangwa chimwe nechimwe. Ini pachangu, ini ndakanyanya kufarira mutambo uyu pakuonekwa kwekunhuhwirira uko kunosanganisa zvinangwa zvekufema nemhino ne "olfactory education" kune pfungwa iyo inowanzo kuregedzwa zvakanyanya zvine chekuita nekuona, kubata, kuravira uye kunzwa.
Respinaso nemasimba ayo makuru - naGiulia Amianti
Respinaso nemakurukota ake yakava nemimba, yakanyorwa uye yakaratidzirwa nemurapi wekurapa Giulia Amianti.
Iyo comic inotaurira nyaya ya Respinaso, a ... mhino kuti awane masimba ake mune shamwari dzake Linguzione, Dentiritti uye Muralabbra. Nemhino tinonhuwa, tinogadzira ruzha, tinopisa uye tinonyorovesa mweya, asi pamusoro pezvose tinofema. Kana pane kudaro, isu tinofanira. Izvo zvinoitika, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, kuti vamwe vana vanowanzo fema nemuromo panzvimbo pemhino, nemhedzisiro yakaipa pahutano (njodzi huru yekutapukirwa nenzeve, kutemwa nemusoro, nezvimwewo), pahunhu hwekurara uye pakuvandudzika kwedunhu rebucco-kumeso. . Kubudikidza nenhevedzano yezviitiko zvinofambira mberi (zvinoratidzwa kuburikidza nekuvandudzwa) kwenyaya, mwana anozotungamirwa akananga kufema kwemhino.
Simba: kukura. Izvo zviitiko zvakasiyana zvinorongedzerwa zvishoma nezvishoma, zvinotsanangurwa uye, zvichizotevera, zvinotsanangurwa zvekare mune imwe nzira yakajeka. Ruzivo rweAdvinaso saka runove ruzivo rwevana rwekufema mweya.
Munyori haasati agamuchira chero muripo wekutarisa kuri papeji rino.
mwana bhodhoro, vhara muromo wako, pacifier, mhuno mabasa, kutaura kurapa mabhuku, remuromo remavara mabhuku, kurambwa, kufema nemuromo, tinobvisa pacifier, kukanganisa kwemuromo
Ongorora: Isu tinobvisa pacifier, kuvhara muromo uye respinaso2019-12-032020-09-15http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/12/coverrecensioni.png200px200px
Ongororo - KUKANGANISWA NZUVA: kuumba mubatanidzwa pakati pemhuri, vanachiremba, vadzidzisi uye varapi vekutauraOngororo, Ongororo